ဗွီဒီယိုကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်း - တော်ဝင်ရတနာစုဆောင်းခြင်း | HIGH ရတနာအိပ်မက်
နှစ်ပေါင်း 200 မမွငျ။ Sotheby's Geneva မှလာမည့်နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်တော်ဝင်ရတနာရတနာစုဆောင်းမှုကိုလာမည့်နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သူတို့တွင်ဘုရင်မ Marie Antoinette ပိုင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောရတနာများ။ ဗွီဒီယိုကြိုတင်ကြည့်ရှုရန်
နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ မမြင်ရသော Bourbon-Parma မိသားစုပိုင်တော်ဝင်ရတနာများကိုစုဆောင်းထားခြင်း။
Queen Marie Antoinette ပိုင်ကျောက်မျက်ရတနာများ ဦး ဆောင်သောပန်းချီကား ၁၀၀ ကျော်ကိုလာမည့်နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် Sotheby's Geneva တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
ဖြန့်ချိသည့်အံ့သြဖွယ်ဗီဒီယိုကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်း Sotheby ရဲ့.
Tags:လလေံပှဲ • တော်ဝင်ရတနာ • Sotheby ရဲ့
မှတ်ချက်0ခုဗီဒီယိုအကြိုမြင်ကွင်း - တော်ဝင်ရတနာစုဆောင်းခြင်း"
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Category ေရြးပါ A. အ Lang & Söhne ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများ အလက်ဇန္ဒရ Mor Andrew Grima ရှေးဟောင်းအပိုင်းအစများ လေလံ လေလံ: Christie's လေလံ: Sotheby's Audemars Piguet aurora Baselworld ၂၀၁၅ Baselworld ၂၀၁၅ Baselworld ၂၀၁၅ Baselworld ၂၀၁၅ Baselworld ၂၀၁၅ Baume et Mercier ခေါင်းလောင်း & ရော့စ် Biennale des Antiquaires 2014 ဘ‌‌လော့ခ် အပြာရောင်စိန် Bonhams Boucheron Breguet သတို့သမီး Bucellati Bulgari နာရီများ Bulgari: Giardini Italiani Bvlgari Cartier Cartier နာရီ နာမည်ကြီးတွေ Chanel Chanel အမြင့်ရတနာ Chanel နာရီ ကဗျာ Chantecler Capri Charriol Genève Chaumet Chopard Chopard အမြင့်ရတနာ Chopard နာရီ ခရစ်ရဲ့ ခရစ်ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ခေတ်ပြိုင်အပိုင်းပိုင်း de Grisogono ပုံစံရေးဆှဲသူ စိန်ပွင့် Dior Dior အမြင့်ရတနာ Dior နာရီ ဖြစ်ရပ်များ ခြွင်းချက်ကျောက်မျက် ထူးခြားသောရတနာ Fabergé Fabergéနာရီများ Fabio Salini Faidee ရတနာ ပြပွဲနှင့်ပြပွဲများ Fendi ရတနာရတနာ ပြခန်း Gübelin GemGenÃ¨ve ကျောက်မျက်ရတနာ Girard-Perregaux Glashütte Graf ၏ဗွန်တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး-Castell Graff Graff နာရီများ Gucci က Harry Winston Haute Couture Hermes အမြင့်ရတနာ သမိုင်းနှင့်အမွေအနှစ် အီတလီ၌ HJD Hublot အထင်ကရ အဆိုပါသတင်းအတွက် စိတ်ဝင်စားခြင်း IWC Jaeger-LeCoultre Jaquet Droz Jewellery ရတနာပုံပြင်များ သက်သေပြ၏ရတနာ Kings & Queens ဒဏ္Legာရီအပိုင်းအစများ လူနေမှုပုံစံစတဲ့ Longines Louis Vuitton အီတလီမှာလုပ် ခမ်းနားရတနာ Marco Bicego လန်ဒန်လက်ရာ မက်ဆီကာ Montblanc မိုးဇက် နာရေးကျွွောငာစာ Objets d'Art အိုမီဂါ Parmigiani Fleurier Pasquale Bruni Patek Philippe ဖိလစ် ဓါတ်ပုံပညာ Piaget Piaget အမြင့်ရတနာ Piaget မြေထဲပင်လယ်ဥယျာဉ်စုဆောင်းခြင်း Piaget လျှို့ဝှက်ချက်များ & အလင်းများ Piaget နာရီ Pomellato quotes Rado သတင်းပို့ခြင်း အစီရင်ခံစာများ retro ရစ်ချတ် Mille Roberto Demeglio ရော်ဂျာ Dubuis Rolex Romain Gauthier တော်ဝင်ပွဲ တော်ဝင်ရတနာ Sara Peymanpour Savoir-Faire ဆိ ဆစ် 2015 ဆစ် 2016 ဆစ် 2017 ဆစ် 2018 ဆစ် 2019 Sotheby ရဲ့ Sotheby အံ့မခန်းအပိုင်းအစ စဉ်ဆက်မပြတ်ရတနာ အဆိုပါရတနာ Vault - မကြာမီလာလိမ့်မည် Throwback ကြာသပတေးနေ့ Tiffany & Co နာရီ Tissot ခေတ်ရေစီးကြောင်း ulysse Nardin Uncategorized အဆိုပါမီးမောင်းထိုးပြအောက်မှာ vacheron Constantine ချစ်သူများနေ့ ဗန် Cleef & Arpels ဗန် Cleef & Arpels အမြင့်ရတနာ ဗန် Cleef & Arpels Timepieces ဗီဒီယိုကိုပြခန်း နာရီနှင့်အံ့ဖွယ်အမှုများ နာရီနှင့် Wonders 2015 နာရီနှင့် Wonders 2021